Vaccine über alles: Iivenkile ezise-Hesse zaseJamani ngoku zinokuthintela bonke abathengi abangafumananga
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamani zokuPhula » Vaccine über alles: Iivenkile kwi-Hesse yaseJamani ngoku zinokubanqabela bonke abathengi abangafumananga
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Culinary • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Vaccine über alles: Iivenkile kwi-Hesse yaseJamani ngoku zinokubanqabela bonke abathengi abangafumananga
Oktobha 16, 2021
Vaccine über alles: Iivenkile kwi-Hesse yaseJamani ngoku zinokubanqabela bonke abathengi abangafumananga.
Iivenkile ezinkulu zaseHesse, eJamani zinikwe imvume yokwala ilungelo elingagunyaziswanga lokuthenga ukutya nezinye izinto eziyimfuneko.
Ngaphantsi komgaqo-nkqubo omtsha, iivenkile eziseHesse, eJamani zinokuthatha isigqibo sokuba iphumeze umthetho we-2G.
Ukongeza kwi-2G entsha, abasebenzi basesibhedlele abahlala bengagonywanga kufuneka bavavanyelwe i-Covid-19 kabini ngeveki.
IHesse ngurhulumente wokuqala waseJamani ukuvumela umthetho kwivenkile zokutya nakwezinye iivenkile zokuthengisa.
Ivenkile ezinkulu eHesse, Jemani banikwe imvume yokwala ilungelo elingagunyaziswanga lokuthenga ukutya kunye nezinye izinto eziyimfuneko, okwenza iHesse ilizwe lokuqala laseJamani livumele amashishini ukuba ale ukukhwela ngaphandle kogonyo nakwezona mfuno zisisiseko.
UMphathiswa we-Hesse-Mongameli uVolker Bouffier
Ummiselo omtsha oseta umzekelo ophazamisayo njengoko abamelwane bawo besilwa noqhankqalazo ngokuchasene negunya lokugonywa sele liqinisekisiwe ngokusesikweni ngurhulumente.
Ngaphantsi komgaqo-nkqubo omtsha, iivenkile zinokuthatha isigqibo sokuba ziyawusebenzisa 'umthetho we-2G', okuthetha ukuvumela ukungena kuphela kugonyo kwaye lubuyiselwe ('geimpft' kunye 'genesen' ngesiJamani) okanye lax '3G Rule', kubandakanya abo kuvavanyiwe ukuba awunayo intsholongwane (i-Getestet).
UMphathiswa we-Hesse-Mongameli uVolker Bouffier Uthe unethemba lokuba lo mthetho mtsha awuzukuphunyezwa ngokubanzi, echaza:
Olona khuseleko lukhulu lubonelelwa ngokugonya. Kwaye ayicacanga, ayinamsebenzi kwaye ikhululekile ukuyifumana, ”utshilo uHerr Bouffier, ephawula ukuba iimasking kunye neemfuno zokuphambuka kwezentlalo ziya kuhlala zikhona kumashishini athe asilela ukwamkela umthetho okhethekileyo we-2G.
Ukutshintshela ukwamkelwa kuphela abantu abagonyiweyo okanye abafunyenweyo, amashishini e-2G avunyelwe ukuyeka ukugawulwa koluntu kunye nokugunyaziswa - mhlawumbi urhwebo olulingayo emva kweenyanga ezili-18 zokugubungela ubuso.
Ukongeza kukhetho olutsha lwe-2G, abasebenzi basesibhedlele abahlala bengagonywanga kufuneka bavavanyelwe i-COVID-19 kabini ngeveki, kwaye abafundi kusafuneka bazifihle xa behleli eklasini.
Ngelixa ezinye ezisibhozo ubuncinci isiJamani Amazwe avule ukhetho lwe-2G kumashishini athile anje ngemivalo, iivenkile zokutyela, iindawo zokuzilolonga, iimovie kunye nendawo zoonongogo, iHesse yeyokuqala ukuvumela umthetho kwiivenkile zokutya nakwezinye iivenkile ezithengisa izinto.
Nangona ezinye izizwe zase-Yuropu ezinjengo-Itali ne-France ziphumeze iimfuno ezingqongqo zokuthintela abantu abangagonyelwanga ukuba basebenze (e-Itali) okanye batye kwiivenkile (eFrance), uninzi lweenkokheli ziyekile ukunikezela igunya ngqo kubemi balo.
Umbuso wase "Hesse" eJamani unika igunya kwiivenkile ezinkulu zokuthintela i-Unvaccinated-i-Prussian Society of America uthi:
Oktobha 17, 2021 kwi-02: 52